ယောင်းတို့တွေ အံ့သြသွားရမယ့် Omega-3 ရဲ့အကျိုးကျေးဇူး (၆) ချက် -
Beauty Health Knowledge
ယောင်းတို့တွေ အံ့သြသွားရမယ့် Omega-3 ရဲ့အကျိုးကျေးဇူး (၆) ချက်
Posted on March 30, 2018 Author Aye Mon Kyaw	Comment(0)
WOW!!! ဒီဟာလေး ပုံမှန်စားပေးရုံနဲ့ ပြန်ရမှာတွေက မနည်းပဲနော်…
မင်္ဂလာပါ ယောင်းတို့ရေ… ” အဆီ” ဆိုတာ ဝမှာကြောက်တဲ့အက်ဒ်မင်တို့ မိန်းကလေးတော်တော်များများ ခေါင်းခါကြတဲ့အရာပါပဲ။ အဆီအစိမ့်တွေစားရင် ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းဘူးလို့ သိထားကြတာကိုး။ ဒါပေမဲ့ အဆီတိုင်းက ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းဘူးတို့၊ ဝပြီးပုံပျက်လာစေတယ်တို့ ဆိုတာတွေက တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ အက်ဒ်မင်တို့အားလုံး စားကို စားရမယ့်၊ တကယ်လည်း လိုအပ်တဲ့ အဆီတစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျန်းမာစေတဲ့ အိုမီဂါ သရီး (Omega-3) fatty acids ပါပဲ။
Omega-3 အဆီဟာ အက်ဒ်မင်တို့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ဒီအဆီကို မထုတ်လုပ်နိုင်တာမို့ အစားအစာကနေ ရယူရပါတယ်။ Omega-3 fatty acidsတွေရဲ့ အရေးပါပုံနဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိပ္ပံနည်းကျ အတည်ပြုထားကြတာကတော့…
(၁) Omega-3ဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေကို လျော့ပါးသက်သာစေပါတယ်။
စိတ်ကျရောဂါ( depression )နဲ့ စိတ်ပူပန်လွန်တဲ့ ရောဂါ (anxiety) ရှိတဲ့ ယောင်းတွေအတွက် Omega-3ဟာ အကူအညီဖြစ်စေမှာပါ။ စိတ်ကျရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ဝမ်းနည်းအားငယ်တာ၊ အင်အားတွေကုန်ခမ်းပြီး စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတာ၊ ကိုယ်လျှောက်နေရတဲ့ ဘဝအပေါ် စိတ်ပါလက်ပါ စိတ်ဝင်တစားမရှိတော့တာ စတာတွေကို ခံစားနေရပြီဆိုရင်၊ စိတ်ပူပန်လွန်ရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ အချိန်ပြည့် လူက တစ်ခုခုကို စိတ်ပူနေတာ၊ ကြောက်ရွံ့နေတာကို ခံစားရပြီဆိုရင် ယောင်းတို့ Omega-3 လိုအပ်နေပါပြီ။ လေ့လာချက်တွေအရ Omega-3 ဓာတ်ရအောင် ပုံမှန်စားပေးတဲ့သူတွေဟာ သူများတွေထက် depressionဝင်နိုင်ချေ ပိုနည်းပါတယ်တဲ့။ ရောဂါခံစားရနေတဲ့သူတွေလည်း Omega-3 ဖြည့်စွက်စာ ကို ပုံမှန်သောက်ပေးတဲ့အခါ ရောဂါလက္ခဏာတွေ လျော့ပါးလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ALA, EPA နဲ့ DHAရယ်လို့ omega-3 အမျိုးအစား သုံးမျိုးရှိတဲ့ အထဲက EPA က စိတ်ကျရောဂါကို တိုက်ဖျက်ရမှာ အစွမ်းဆုံးပါတဲ့။
(၂) Omega-3ဟာ မျက်လုံး အားကောင်းစေတာမို့ မျက်လုံးမှုန်နေတဲ့ ယောင်းတွေအတွက်လည်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
Omega3အမျိုးအစားသုံးခုထဲက DHAဟာ မျက်ကြည်လွှာနဲ့ဦးနှောက်တည်ဆောက်မှုအတွက် အဓိက ပါဝင်ပစ္စည်းပါ။ ယောင်းတို့အနေနဲ့ DHAဓာတ်မရဘူးဆိုရင်တော့ မျက်လုံးပါဝါ မြင့်တက်လာနိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ ဒါ့ပြင် DHAသာ လုံလုံလောက်လောက်ရမယ်ဆိုရင် ယောင်းတို့ အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါ ထာဝရအမြင်အာရုံဆုံးရှုံးသွားစေတဲ့ Macular degenerationဆိုတဲ့ ပြဿနာကို လျော့ကျစေပါသေးတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် ပုလင်းဖင် ပါဝါမျက်မှန်တပ်ရတဲ့ ယောင်းတွေ omega-3ဓာတ်ကို ငယ်ငယ်တည်းက ရယူသင့်တယ်နော်။ အက်ဒ်မင်ကတော့ Omega-3 ပုံမှန်သောက်လာလို့လား မသိဘူး ခုထိ မျက်မှန်မတပ်ရသေးဘူးရယ် ။
Related Article >>> ကျော့ကျော့မော့မော့နဲ့ ဗိုက်ချပ်စေမယ့် ဖြတ်လမ်းနည်း(၆)မျိုး
(၃) Omega-3 နည်းတဲ့သူတွေဟာ ညဘက်အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါ ရနိုင်ချေလည်း များပါတယ်တဲ့.. တိုက်ရိုက်တော့ မဟုတ်ပေမဲ့ပေါ့။
ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ဖို့ ဆိုရင် melatonin hormone လိုအပ်ပြီး omega-3 ဓာတ်နည်းတဲ့သူတွေမှာ ဒီ melatonin hormoneလျော့နည်းတာကို တွေ့ရပါတယ်တဲ့။ အိပ်ရေးမဝတဲ့ပြဿနာဟာ အဝလွန်ရောဂါ၊ ဆီးချိုသွေးချို နဲ့ စိတ်ကျရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေတာမို့ မပေါ့သင့်ပါဘူးနော်။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေမှာကော လူကြီးတွေမှာကော ညဘက် ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်တဲ့ ပြဿနာရှိလာပြီဆိုရင် အိပ်ချိန်ကြာမြင့်စေဖို့နဲ့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ Omega-3ဖြည့်စွက်စာကို စားသုံးပါလို့ အနောက်နိုင်ငံကဆရာဝန်တွေက အကြံပြုကြပါတယ်။
(၄) Omega-3ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေတွေနဲ့ ကလေးမွေးပြီးခါစ မေမေတွေအတွက်လည်း အရေးပါ ပါသေးတယ်။
Omega-3ဟာ မွေးကင်းစကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ကြီးထွား ဖွံ့ ဖြိုးဖို့အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်လို့ပါပဲ။နောက်ပြီး DHAဓာတ်မှာ ဦးနှောက်ကလိုအပ်တဲ့ fatty acid ၄၀%နဲ့ မျက်ကြည်လွှာက လိုအပ်တဲ့ ၆၀%ပါဝင်နေတာမို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလမှာကော နို့တိုက်စဉ်ကာလမှာကော ယောင်းတို့ မေမေတွေအနေနဲ့ omega-3ကို ကောင်းကောင်း မှီဝဲပေးဖို့ လိုပါတယ်နော်။
(၅) Omega-3ဟာ အသားအရည်လှချင်တဲ့ ယောင်းတို့ အတွက်လည်း ဆေးစွမ်းကောင်း တစ်ခွက်ပါပဲ။
Omega3ဟာ အရေပြားတည်ဆောက်မှုအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး အက်ဒ်မင်တို့အသားအရေအတွက် အရေးပါတဲ့ ဆဲလ်အမြှေးပါးလေးတွေကျန်းမာဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်။ omega-3 ပုံမှန်စားသုံးရင် စိုပြေ နူးညံ့ပြီး အရေးကြောင်းကင်းတဲ့ အသားရည်မျိုး ဖြစ်စေပါတယ်တဲ့။ ဘာလို့လဲဆို Omega-3ထဲက EPAဟာ အရေပြားထဲက အဆီထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ပေးပြီး ဝက်ခြံ ပေါက်တာနဲ့ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းတာကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
အစားအသောက် ဇီဇာကြောင်တဲ့ အက်ဒ်မင်က ကိုယ်တွေ့ပါပဲ။ သူများတွေလို အသားရည်လှအောင် အသီးအနှံစားတာမရှိပေမယ့် ငယ်ငယ်ထဲက အဖေက Omega-3 ဖြည့်စွက်စာ တိုက်လာလို့ထင်တယ် ခုထိ မျက်နှာမှာ ဝက်ခြံတွေပေါက်တာမရှိလို့ အသားရည် မွဲခြောက်ခြောက်ဖြစ်တာလည်းမရှိခဲ့ဘူးရယ်.. 😁
(၆) ဓမ္မတာကြောင့် နာကျင်ကိုက်ခဲတာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
နောက်ပြီး Omega-3ပုံမှန်သောက်တဲ့သူတွေဟာ ရာသီလာတဲ့အခါ မသောက်တဲ့သူတွေလောက် ဆိုးဆိုးရွားရွားနာကျင်တာမျိုး မရှိပါဘူးတဲ့။ နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ ဒဏ်က ပျော့ပျောင်းပါတယ်တဲ့။ လေ့လာစမ်းသပ်ချက်တွေအရ side-effectတွေရှိတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေထက် Omega-3က ပိုစိတ်ချရပြီး ပိုထိရောက်ပါတယ်တဲ့ ယောင်းတို့ရေ။
Omega-3ကို ငါးရဲ့အဆီနဲ့ အစေ့အဆံတွေကနေ အပြင် ဖြည့်စွက်စာ (supplement)ကနေလည်း ရယူနိုင်ပါတယ်။ မိခင်နို့ရည်ကနေလည်း ရနိုင်သလို ဆာလ်မွန်ငါး ၊ မက်ကရယ်ငါး၊ ဆာဒင်းငါး စတဲ့ငါးအဆီတွေအပြင် ရေညှိအမျိုးမျိုးကနေလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ပဲပိစပ်လို့ ခေါ်တဲ့ soybeanနဲ့ သစ်ကြားသီးလို အခွံမာအသီးကနေလည်း Omega-3ဓာတ်ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီငါးတွေ နဲ့ အစေ့အဆံတွေကို ရဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ ဖြည့်စွက်စာ (supplement)သောက်တာပါပဲ ယောင်းတို့ရေ…
ဒါကြောင့်မို့ ခန္ဓာကိုယ်က ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ အရေးပါတဲ့ Omega-3ဓာတ်ကို ငယ်ငယ်တည်းက ရအောင်ယူထားရင် အကောင်းဆုံးပါပဲနော်။ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက်ကော အသုံးဝင်တဲ့အပြင် လှချင်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက်လည်း Omega-3ဟာ အလှအပရေးရာအတွက်ပါ အသုံးကျတာမို့ ဒီနေ့ကစပြီး Omega-3 ဖြည့်စွက်စာကို ပုံမှန်သောက်ကြမယ်မလား ယောင်းတို့ရေ….
Mira ( For Her Myanmar )
Reference links: Food NDTV , HealthLine , Medical News Today , All about Vision
Tagged Beauty, eyes, Fatty Acid, Fitness, Health, Knowledge, Menstruation, Omega 3
Aye Mon Kyaw
ကျွန်မကတော့ Miaပါ။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စာတွေ၊ ကျန်းမာရေးတွေ ရေးပေးမယ့်သူပါ။ foodieဖြစ်တာမို့ ဟင်းချက်နည်းတွေလည်း ရေးပေးမှာနော်။
အုန်းဆီကို ဆံပင်အတွက်မဟုတ်ဘဲ မျက်နှာအသားအရည်အတွက် အသုံးပြုတဲ့အခါ..
Posted on August 11, 2017 Author Miko
အုန်းဆီကို ဆံပင်မှာပဲ သုံးလို့ရတယ်လို့ ထင်နေကြတယ်ဟုတ်… မျက်နှာအတွက်လည်း အုန်းဆီကို အသုံးပြုလို့ရတယ်နော်….
Posted on May 2, 2018 July 25, 2018 Author Sugar Cane
ဗောက်ပျောက်ချင်ပါတယ်ဆို ဗောက်ပျောက်ခေါင်းလျှော်ရည်တွေနဲ့ကမတည့်.. လေပါဒယ် :'(
ကလေးတွေ စာလေ့လာတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုကူညီပေးကြမလဲ
Posted on March 13, 2018 March 14, 2018 Author Myat Moe
ဆရာမတွေအပေါ်မှာပဲ တစ်ချိန်လုံး အားကိုးနေလို့မရပါဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း အိမ်မှာ ကလေးကို ကူညီအားဖြည့်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
အိမ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြမယ်။
Album ထွက်မလာသေးပေမဲ့ Ktown4u Chart List မှာ တစ်ပတ်တာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး နံပါတ်(၁) ဖြစ်နေတဲ့ Baekhyun ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ခွေ
Posted on June 24, 2019 June 24, 2019 Author Ei Mon
Posted on June 21, 2019 June 21, 2019 Author Ei Mon
Posted on June 21, 2019 June 21, 2019 Author Yin Sandi Ko
အသစ်အသစ်တွေကို ခံစားကြည့်ရှုချင်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် Viu မှာ အသစ်ထပ်တင်ထားတဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားများ